Intel ga-eji dochie ụda olu 3.5mm maka njikọ USB-C | Esi m mac
Intel chọrọ iwepụ jaak 3.5 mm maka USB-C
Utochi nke uzu bu ihe apughi ikwuputa ma odi ka odi na ihe eji eme ka nkpu isi nke 3.5mm nwere ubochi ya ma obu ya dika odi Intel, mgbawa sonye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-atụ aro ndị nnọchi nke a analọg ọdịyo ọsọ ọsọ na a dijitalụ ọzọ.
Intel kwadoro nke a n'ihi na ngwaọrụ ndị ga - abịa n'ọdịnihu gụnyere teknụzụ ya, ma ama, mbadamba na ụfọdụ akụrụngwa kọmputa tụfuo mkpọku isi adịkarị ka ịgbanwee gaa USB-C. Companylọ ọrụ ahụ kwuru okwu a na nnọkọ mmepe mmepe nso nso a ebe ha webatara ụda dijitalụ USB-C.
N'oge na-adịghị anya, Intel ga-anwa ịgbanye jack dị egwu na nkọwapụta ọdịyo USB-C analog. Intel kwuru njem a ọ ga-abụ "ihu ọma a njikọ nnọchi."
Agbanyeghị na-elepụ anya n'ọdịniihu, ha nwere olile anya na nkuchi nke USB-C na-enyekwa aka ka ha na-eme ihe iji kwụsị analọg afọ na-akpali dijitalụ ọdịyo.
Site na njirimara onye ọrụ, ịkwaga na ekwe omume dijitalụ audio mmepụta nwere ike ịbụ ezigbo echiche, yabụ ihe kacha mma na ọdịyo ga-abụ nke doro anya tinyere Intel, onye rụrụ ya semiconductor kasị ukwuu n'ụwa site dị nnọọ ka ọ pụrụ rụpụta analọg na dijitalụ audio akakabarede ibe.
N'aka nke ọzọ, ihe akaebe na-eto eto na-egosi na Apple na-atụgharị uche n'ụzọ yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ kwenyere na onye na-eme iPhone ga-ah or o nke gi ihe mmịnye ọkụ kama iji ụlọ ọrụ ọkọlọtọ, USB-C, ọbụlagodi na ngwaọrụ iOS gị (iPhone na iPad). Nke a na-ewelite ọnọdụ dị egwu na obere ọgụ dị n'etiti Intel na USB-C na njikọta nke Apple, njikọta, dịka enwere ike ịme Intel ịmalite ịme mkparịta ụka maka Apple na nso nso a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Intel chọrọ iwepụ jaak 3.5 mm maka USB-C
Vidio vidio nke ogige dị n'ime Apple's Campus 2 ruru netwọkụ
Apple Pay na -denye azụmaahịa ugboro 5 karịa nke afọ gara aga